HomeKnowledgeကမ်ဘာမွဆှေဲအားမရှိတဲ့ နရော (၈) ခု
ကမ်ဘာမွကွေီးရဲ့ ဆှဲအား နိယာမတှကေို Sir Isaac Newton က တှရှေိ့ခဲ့ ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကမ်ဘာပျေါက အခြို့နရောတှမှော ကမ်ဘာမွကွေီးရဲ့ ဆှဲအားတှေ မရှိပါဘူး။
1. ပွောငျးပွနျ စီးဆငျးနတေဲ့ ရတေံခှနျ
အင်ျဂလနျနိုငျငံမှာ ရှိတဲ့ ပွောငျးပွနျ စီးဆငျးတဲ့ ရတေံခှနျက Hayfield ရှာနဲ့ သိပျမဝေးပါဘူး။ အဲဒီ ရတေံခှနျက ရတှေကေ အောကျကို မစီးဆငျးဘဲ ရပေနျးလိုမြိုး အပျေါကို ရတှေေ ဖွာတကျနေ ပါတယျ။ ရတေံခှနျနားမှ လကေ ပွငျးပွငျးထနျထနျ တိုကျခတျပါတယျ။ တိုကျလိုကျတဲ့ လတှေကွေောငျ့ ရကေ အောကျကို ပွနျကလြာ ပါတယျ။ ရတေံခှနျရဲ့ အမွငျ့က 78 ပေ မွငျ့ပါတယျ။
2. အမရေိကနျနိုငျငံ၊ Oregon ပွညျနယျက စိတျဝငျစားစရာတှေ ပွညျ့နတေဲ့အိမျ
ဒီအိမျက Oregon ပွညျနယျက တောနကျကွီးထဲမှာ ရှိပါတယျ။ အဲဒီဒသေကို လူတှေ မသှားရောကျဖို့ တားမွဈထား ပါတယျ။ အိမျရဲ့တဈဝကျက မွကွေီးထဲ ရောကျနပေါတယျ။ အဲဒီအိမျမှာ သာမနျအတိုငျး လမျးလြှောကျဖို့ မဖွဈနိုငျပါဘူး။ လမျးလြှောကျမယျ ဆိုရငျ နံရံတှကေို ကိုငျပွီး လမျးလြှောကျရမှာပါ။ အဲဒီအိမျထဲမှာ ရှိတဲ့ တံမွကျစညျး တဈခြောငျးက လထေဲက လဲမသှားဘဲ အထောငျလိုကျဖွဈနပေါတယျ။ တခွားပစ်စညျးတှကေို ထားရငျလညျး လဲမသှားဘဲ အထောငျလိုကျ ဖွဈနတေတျပါတယျ။
3. အာမေးနီးယားနိုငျငံက Aragat တောငျခွလေမျး
တူရကီနိုငျငံနဲ့ အာမေးနီးယား နိုငျငံနယျစပျမှာ စိတျဝငျစားစရာ ကောငျးတဲ့ တောငျတဈလုံး ရှိပါတယျ။ အဲဒီတောငျက ကမ်ဘာမွဆှေဲအား မရှိတဲ့ ဖွဈစဉျကို ကွညျ့ဖို့ ခရီးသှားတှကေ နှဈစဉျ ရောကျလာကွပါတယျ။ တောငျခွမှော ကားကို စကျမနှိုးဘဲ ရပျထားရငျ ကားက သူ့အလိုလို တောငျပျေါကို တကျသှားပါလိမျ့မယျ။ တောငျခွကေို ရောကျဖူးသူတှကေ တောငျဆငျးရတာထကျ တောငျတကျရတာ ပိုလှယျတယျလို့ ပွောပါတယျ။
4. အမရေိကနျနိုငျငံ၊ Nevada ပွညျနယျက Hoover ဆညျ
Hoover ဆညျက 726.4 ပေ မွငျ့ပါတယျ။ ဆညျရဲ့ အပျေါကနေ ရလေောငျးခရြငျ ရကေ အောကျကို ကမြသှားဘဲ လထေဲမှာပဲ ရှိနေ ပါတယျ။ တခွား ပေါ့ပါးတဲ့အရာတှကေို ပဈခရြငျလညျး အောကျကိ မကသြှားပါဘူး။ လရေဲ့အရှိနျနဲ့ တခွားနရောကို ရောကျသှားပါတယျ။
5. အမရေိကနျနိုငျငံ Wyoming ပွညျနယျက Devils Tower
Devils Towerက Black Hills တောငျတနျးမှာ ရှိပါတယျ။ Devils Towerကို တောငျတကျသမားတှကေ သဘောကကြွ ပါတယျ။ တောကျတကျသမားတှကေ ဧဝရတျတောငျထိပျကို တကျနိူငျပမေယျ့ Devils Towerရဲ့ ထိပျကိုတော့ မတကျနိုငျပါဘူး။ Devils Towerရဲ့အမွငျ့က 1267 ပေ ရှိပါတယျ။ တောငျနံရံတှကေ မတျစောကျလို့ ပွနျဆငျးဖို့ မလှယျသလို တောငျထိပျရောကျ ဖို့လညျး မလှယျပါဘူး။
6. တောငျကိုရီးယားနိုငျငံက ထူးဆနျးတဲ့လမျး
တောငျကိုရီးယားနိုငျငံ၊ Jujuကြှနျးက လမျးလေးတဈခုမှာ ဘူးခှံလေးတှကေို ပဈခလြိုကျရငျ လှိမျ့မသှားဘဲ ကုနျးမွငျ့ပိုငျးကို တကျသှားပါတယျ။ ခရီးသှားတှကေ ဘူးခှံတှေ အမြားကွီးနဲ့ စမျးသပျကွ ပါတယျ။ ဒီလမျးလေးက ခရီးသှားတှကေို တျောတျော ဆှဲဆောငျနိုငျပါတယျ။ တခြို့ဆိုရငျ ကြောကျပွားတှနေဲ့ စမျးသပျကွ ပါတယျ။
ကြိုကျထီးရိုးဘုရားကို တညျထားတာ နှဈပေါငျး 2500 ရှိပါပွီ။ ကြောကျတုံးကွီး ထဲမှာ ဗုဒ်ဓဘုရားရဲ့ ဆံတျောကို ဌာပနာထားတယျလို့ ပွောကွပါတယျ။ ကြောကျထီးရိုး ဘုရားက ကြောကျစှနျမှာ ရှိနပေမေယျ့ အောကျကို ပွုတျကြ မသှားပါဘူး။ အမြိုးသမီးတှေ ကိုတော့ ကြိုကျထီးရိုးဘုရားကို ထိခှငျ့မပွုထားပါဘူး။
8. အာဂငျြတီးနားနိုငျငံက Davasko ကြောကျတုံး
Davasko ကြောကျတုံးကွီးက ကမ်ဘာမွကွေီးရဲ့ ဆှဲအားကို ဆနျ့ကငျြပွီး တညျရှိနတော ဖွဈပါတယျ။ ကြောကျတုံးရဲ့အလေးခြိနျက တနျ 300 ထကျ ပိုပါတယျ။ ကွီးမားတဲ့ ကြောကျဆောငျကွီးရဲ့ အစှနျမှ တညျရှိတာ ဖွဈပွီး သကျတမျးက နှဈပေါငျးထောငျခြီပွီး ကွာမွငျ့နပေါပွီ။ 1912 ခုနှဈ၊ ဖဖေျောဝါရီ 29 ရကျမှာ Davasko ကြောကျတုံးကွီး ပွုတျကသြှား ခဲ့ပါတယျ ။ နှဈပေါငျး 95 နှဈ ကွာတဲ့အခါ ကြောကျတုံးရဲ့ ပုံစံတူကို ပွုလုပျပွီး Davasko ကြောကျတုံးရှိခဲ့တဲ့ နရောမှာ ထားခဲ့ ပါတယျ။ အခု လကျရှိ ပုံစံတူ ကြောကျတုံးက9တနျ ရှိပွီး ကြောကျဆောငျကွီးရဲ့ အစှနျမှာပဲ ရှိပါတယျ။
ကမ္ဘာမြေဆွဲအားမရှိတဲ့ နေရာ (၈) ခု
ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့ ဆွဲအား နိယာမတွေကို Sir Isaac Newton က တွေ့ရှိခဲ့ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကမ္ဘာပေါ်က အချို့နေရာတွေမှာ ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့ ဆွဲအားတွေ မရှိပါဘူး။
1. ပြောင်းပြန် စီးဆင်းနေတဲ့ ရေတံခွန်
အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ ပြောင်းပြန် စီးဆင်းတဲ့ ရေတံခွန်က Hayfield ရွာနဲ့ သိပ်မဝေးပါဘူး။ အဲဒီ ရေတံခွန်က ရေတွေက အောက်ကို မစီးဆင်းဘဲ ရေပန်းလိုမျိုး အပေါ်ကို ရေတွေ ဖြာတက်နေ ပါတယ်။ ရေတံခွန်နားမှ လေက ပြင်းပြင်းထန်ထန် တိုက်ခတ်ပါတယ်။ တိုက်လိုက်တဲ့ လေတွေကြောင့် ရေက အောက်ကို ပြန်ကျလာ ပါတယ်။ ရေတံခွန်ရဲ့ အမြင့်က 78 ပေ မြင့်ပါတယ်။
2. အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ Oregon ပြည်နယ်က စိတ်ဝင်စားစရာတွေ ပြည့်နေတဲ့အိမ်
ဒီအိမ်က Oregon ပြည်နယ်က တောနက်ကြီးထဲမှာ ရှိပါတယ်။ အဲဒီဒေသကို လူတွေ မသွားရောက်ဖို့ တားမြစ်ထား ပါတယ်။ အိမ်ရဲ့တစ်ဝက်က မြေကြီးထဲ ရောက်နေပါတယ်။ အဲဒီအိမ်မှာ သာမန်အတိုင်း လမ်းလျှောက်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ လမ်းလျှောက်မယ် ဆိုရင် နံရံတွေကို ကိုင်ပြီး လမ်းလျှောက်ရမှာပါ။ အဲဒီအိမ်ထဲမှာ ရှိတဲ့ တံမြက်စည်း တစ်ချောင်းက လေထဲက လဲမသွားဘဲ အထောင်လိုက်ဖြစ်နေပါတယ်။ တခြားပစ္စည်းတွေကို ထားရင်လည်း လဲမသွားဘဲ အထောင်လိုက် ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
3. အာမေးနီးယားနိုင်ငံက Aragat တောင်ခြေလမ်း
တူရကီနိုင်ငံနဲ့ အာမေးနီးယား နိုင်ငံနယ်စပ်မှာ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတဲ့ တောင်တစ်လုံး ရှိပါတယ်။ အဲဒီတောင်က ကမ္ဘာမြေဆွဲအား မရှိတဲ့ ဖြစ်စဉ်ကို ကြည့်ဖို့ ခရီးသွားတွေက နှစ်စဉ် ရောက်လာကြပါတယ်။ တောင်ခြေမှာ ကားကို စက်မနှိုးဘဲ ရပ်ထားရင် ကားက သူ့အလိုလို တောင်ပေါ်ကို တက်သွားပါလိမ့်မယ်။ တောင်ခြေကို ရောက်ဖူးသူတွေက တောင်ဆင်းရတာထက် တောင်တက်ရတာ ပိုလွယ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
4. အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ Nevada ပြည်နယ်က Hoover ဆည်
Hoover ဆည်က 726.4 ပေ မြင့်ပါတယ်။ ဆည်ရဲ့ အပေါ်ကနေ ရေလောင်းချရင် ရေက အောက်ကို ကျမသွားဘဲ လေထဲမှာပဲ ရှိနေ ပါတယ်။ တခြား ပေါ့ပါးတဲ့အရာတွေကို ပစ်ချရင်လည်း အောက်ကိ မကျသွားပါဘူး။ လေရဲ့အရှိန်နဲ့ တခြားနေရာကို ရောက်သွားပါတယ်။
5. အမေရိကန်နိုင်ငံ Wyoming ပြည်နယ်က Devils Tower
Devils Towerက Black Hills တောင်တန်းမှာ ရှိပါတယ်။ Devils Towerကို တောင်တက်သမားတွေက သဘောကျကြ ပါတယ်။ တောက်တက်သမားတွေက ဧဝရတ်တောင်ထိပ်ကို တက်နိူင်ပေမယ့် Devils Towerရဲ့ ထိပ်ကိုတော့ မတက်နိုင်ပါဘူး။ Devils Towerရဲ့အမြင့်က 1267 ပေ ရှိပါတယ်။ တောင်နံရံတွေက မတ်စောက်လို့ ပြန်ဆင်းဖို့ မလွယ်သလို တောင်ထိပ်ရောက် ဖို့လည်း မလွယ်ပါဘူး။
6. တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံက ထူးဆန်းတဲ့လမ်း
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၊ Jujuကျွန်းက လမ်းလေးတစ်ခုမှာ ဘူးခွံလေးတွေကို ပစ်ချလိုက်ရင် လှိမ့်မသွားဘဲ ကုန်းမြင့်ပိုင်းကို တက်သွားပါတယ်။ ခရီးသွားတွေက ဘူးခွံတွေ အများကြီးနဲ့ စမ်းသပ်ကြ ပါတယ်။ ဒီလမ်းလေးက ခရီးသွားတွေကို တော်တော် ဆွဲဆောင်နိုင်ပါတယ်။ တချို့ဆိုရင် ကျောက်ပြားတွေနဲ့ စမ်းသပ်ကြ ပါတယ်။
ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားကို တည်ထားတာ နှစ်ပေါင်း 2500 ရှိပါပြီ။ ကျောက်တုံးကြီး ထဲမှာ ဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့ ဆံတော်ကို ဌာပနာထားတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ ကျောက်ထီးရိုး ဘုရားက ကျောက်စွန်မှာ ရှိနေပေမယ့် အောက်ကို ပြုတ်ကျ မသွားပါဘူး။ အမျိုးသမီးတွေ ကိုတော့ ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားကို ထိခွင့်မပြုထားပါဘူး။
8. အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံက Davasko ကျောက်တုံး
Davasko ကျောက်တုံးကြီးက ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့ ဆွဲအားကို ဆန့်ကျင်ပြီး တည်ရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောက်တုံးရဲ့အလေးချိန်က တန် 300 ထက် ပိုပါတယ်။ ကြီးမားတဲ့ ကျောက်ဆောင်ကြီးရဲ့ အစွန်မှ တည်ရှိတာ ဖြစ်ပြီး သက်တမ်းက နှစ်ပေါင်းထောင်ချီပြီး ကြာမြင့်နေပါပြီ။ 1912 ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ 29 ရက်မှာ Davasko ကျောက်တုံးကြီး ပြုတ်ကျသွား ခဲ့ပါတယ် ။ နှစ်ပေါင်း 95 နှစ် ကြာတဲ့အခါ ကျောက်တုံးရဲ့ ပုံစံတူကို ပြုလုပ်ပြီး Davasko ကျောက်တုံးရှိခဲ့တဲ့ နေရာမှာ ထားခဲ့ ပါတယ်။ အခု လက်ရှိ ပုံစံတူ ကျောက်တုံးက9တန် ရှိပြီး ကျောက်ဆောင်ကြီးရဲ့ အစွန်မှာပဲ ရှိပါတယ်။